Dowladda oo Amartay in la xiro Goobaha Waxbarashada & kuwa lagu Caweeyo - Awdinle Online
Dowladda oo Amartay in la xiro Goobaha Waxbarashada & kuwa lagu Caweeyo
Dowladda Soomaaliya ayaa amartay in la xiro dhamaan goobaha Waxbarashada, Xafiisyada Dowladda waxaana la fasaxay shaqaalaha Dowladda.
Waxaa la joojiyay xafaldaha aroosyada iyo goobaha cawayska habeenkii.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in banaanbaxyada ruqsadaha heysta looga baahan yahay in ay ilaaliyaan kala fogaanshaha.
Inta badan shaqooyinka aan muhiimka aheyn ayaa la joojiyay labo todobaad si looga hortaggo faafitaanka Cudurka Karoonaha.
Akhriso go,aamada kasoo baxay Xukuumadda.
HABRAACA XAMMEYNTA SOO LAB KACLEYNTA XANUUNKA COVID-19.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya H.E. Maxamed Xuseen Rooble, markii uu qiimeeyey soo laba kaclaynta xanuunka COVID-19
Previous articleCiiddan ka tirsan Nabad-ilaalinta QM oo lagu duray Tallaalka COVID 19 oo been abuur ah
Next articlePuntland & Jubbaland oo markale shuruud ku xiray ka qeyb-galka shirka uu ku baaqay Farmaajo